Morontsiraka Cantarriján any Almuñécar | Vaovao momba ny dia
Morontsiraka Cantarriján any Almuñécar
Ranomasina sy ranomasina | | Granada
La Morontsiraka Cantarriján, miorina eo andrefan'ny Almuñécar ary manatrika ny harambato Maro ao amin'ny Valan-javaboahary Maro-Cerro Gordo, tsy isalasalana fa iray amin'ireo morontsiraka tsara tarehy indrindra ao amin'ny Costa Tropical. Izy io dia mametra ny sisintany eo anelanelan'ny faritanin'i Malaga sy Granada (io indrindra no morontsiraka farany Granada any andrefana) ary toerana malaza be eo amin'ireo mpitia ny fitanjahana. Vatosoa miafina kely nefa mendrika hanakaikezana azy.
Na eo aza izany fidirana sarotra izany dia morontsiraka izay matetika feno olona foana. Sahabo ho 400 metatra ny halavany ary, alohan'ny hahatratrarana azy dia olona maro no mijanona eo amin'ny toerana fijery mba hankafy ny fomba fijery kanton'ny Mediteraneana. Amin'ny ankapobeny, Cantarriján dia manolotra endrika tony sy paradisa. Misy helodrano voalohany rehefa tonga ianao, ary any no toerana ifantohan'ny olona manao akanjo milomano, satria rehefa lanina ny vatolampy hantsana dia io no faritra miboridana. Misy ireo izay manome toky fa ity tora-pasika ity dia mbola tsiambaratelo akaiky kely fa tsara kokoa ny tsy mahita ny ambiny.
Any Cantarriján dia afaka mandry mangingina amin'ny masoandro ianao, milentika, mandeha mitsangantsangana ary mizaha ilay faritra, miakatra amin'ny fomba fijery, manofa sambo pedal, mankafy fanorana na milentika scuba. Misy ihany koa ny trano fisakafoanana roa, lounger masoandro sy elo, fanofana kayak, sns ...
- Fampahafantarana fanampiny
Amin'ny alàlan'ny fiara ihany no ahatongavan'ilay morontsiraka eo anelanelan'ny volana septambra sy jona. Amin'ny volana Jolay sy Aogositra dia misokatra ho an'ny serivisy fitaterana bus mahazatra ihany ny lalana, amin'ny vidiny roa euro, izay miainga avy eo amin'ny fiantsonan'ny fiara ka hatrany amoron-dranomasina mandritra ny andro. Amin'izany fomba izany dia tsy maintsy avelanao eo amin'ny toerana fijanonan'ny fiara ny fiaranao ary handray ny bus izay mitondra anao amin'ny làlana misy fiolahana sy zavamaniry maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Granada » Morontsiraka Cantarriján any Almuñécar
Mallorca, iray amin'ireo toerana fizahan-tany miavaka indrindra any Eropa